Shirkii Archives - Page 2 of 4 - Ibsaa Jireenyaa
Wantoonni Rabbii gaditti gabbaraman nama qajeelchuu hin danda’an
Sababni biroo namoonni Rabbii olta’aan alatti wanta biraa itti waaqefataniif jireenya keessatti qajeelcha barbaadudha. Jireenyi tuni iddoo qormaataa waan taateef namni yeroo garmalee itti dhama’uu fi gara itti deemu wallaalutu jira. Yeroo kanatti humna guddaa isa qajeelchu barbaada. Wantoonni Rabbii olta’aan alatti waaqeffataman takkaa sanamoota lubbu hin qabne, takkaa nama du’eedha, takkaa immoo lubbu-qabeenyi namarraa fagoo ta’anii fi deebii namaaf deebisuu hin dandeenyedha. Sanamoonni siidaa waan ta’aniif hin dhagayan, hin argan, homaa hin beekan. Kanaafu, sanamoota irraa qajeelcha barbaaduuf jecha isaan waaqeffachuun hojii sobaati fi doofummaa guddaadha. Namni du’ees ruuhin waan keessaa baatef homaa hin dhagayu, hin argu. Kanaafu, wanti hin arginee fi hin dhageenye akkamitti nama qajeelchaaa? Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa ni jedha.
June 28, 2020 Sammubani 2 comments
Fakkeenya dadhabinna gabbaramtoota mushrikootaa
Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa wantoonni mushrikoonni waaqeffatan uumamtoota hunda caalaa uumama baay’ee dadhabaa fi xiqqaa ta’e uumuu irraa dadhaboo akka ta’an, inumaa uumamni dadhabaan kuni osoo waa harkaa bute deebisu akka hin dandeenye ibsuuf fakkeenya ni dhiyeessa:
Kutaa darbe keessatti shirkiin soba ta’uu ragaalee sammuutii fi wahyiitiin ilaalle jirra. Kutaa kana keessatti Qur’aana irraa fakkeenya dhyeessuun fokkinnaa fi soba shirkii caalatti ni ilaalla.